Mianara bebe kokoa momba ny orinasa Ettore Bugatti
Ettore Bugatti: Mpisolovava iray mafana fo
Ny Ettore Bugatti teraka Italiana dia nipoitra tahaka ny fiheveran'ny maro an'isa amin'ny fahitalavitra : manamboatra bisikileta amin'ny faran'ny taonjato faha-20. Nanamboatra andianà fiara efa niasa ho an'ny orinasa maro samihafa Eoropeana izy ary namorona ny orinasa Bugatti.
Ny fiara izay noforoniny dia ahitana:
Karazana 1: ho an'i Prinetti sy Stucchi, fiara efatra natsangana
Karohy 2: ho an'i Dietrich; 5.3-litatra
Karohy 3: ho an'i Dietrich; 7.4-litatra
Karazana faha 4 sy 5: ho an'i Dietrich; 12.9 litatra
Andininy 6 sy 7: ho an'i Mathis; Modely Hermes
Andininy 8 sy 9: ho an'i Deutz; cams overhead
Karazana 10: ho an'ny Deutz: 1.2-litatra 4-cylinder
Jereo ny sary avy amin'ny tantaran'i Bugatti ao amin'ny galeria.
Le Patron sy ny Lucky Number 13
Ettore Bugatti dia namolavola ny fiarany voalohany, ary ny anarany dia napetraka teo amin'ny kilaometatra, tamin'ny 1910. Ny karazana 13 dia naorin'ny Automobiles Ettore Bugatti tao amin'ny foiben-toerany tao Molsheim, akaikin'i Strasbourg any Frantsa. Ny fiara dia manana milina 4 milimetatra miloko milanja 20 bhp ary haingam-pandeha ambony 60 mph. "Le Patron," tahaka an'i Ettore Bugatti dia fantatra, teo amin'ny faha-20 taonany tamin'izany fotoana izany, ary efa fantatra amin'ny fiankinan-doha aminy. Nandritra ny taona maro, dia nanohitra ny fanavaozana toy ny teti-bola sy ny famokarana betsaka izy mba hamoronana ny sasany amin'ireo fiara tsara tarehy - indrindra fa fiara fiara - manerana izao tontolo izao nandritra ny telopolo taona.
Blaogin'i Bugatti Blue
Tahaka ny ankamaroan'ireo mpanamboatra fiara tamin'izany fotoana izany, indrindra fa tany Eoropa, ny fanavaozana ny lalao dia nanosika ny tetikasa ho eny an-dalambe.
Namporisihiny koa ny mpividy mba hividy amin'ny vanim-potoana alohan'ny fahitalavitra. Ettore Bugatti dia mpihazakazaka matihanina ary nanamboatra fiara - nanamboatra ny manga frantsay iray miavaka - izay nanapaka ny lalana, tahaka ny Andriamatoa 13 izay naka ny toerana efatra lehibe tany Brescia, Italia, tamin'ny taona 1921. Ny karazana 13 dia fantatra ho ny "Brescia , "ary ny Bugatti ambony indrindra hatramin'izay, tamin'ny fiara 2000 nahita loharanom-baovao.
Ny sokajy 35 no Bugatti voalohany natao teo amin'ny lalana tahaka ny nataony teny an-dalana.
Ny orinasa Bugatti: Fianakaviana fianakaviana
Indray, toy ireo mpanamboatra fiara maro be tany am-piandohan'ny vanim-potoana fiara, Bugatti dia orinasam-pianakaviana. Ny zokin'i Anthony lahimatoan'i Ettore dia naka ny orinasa tamin'ny faran'ny taona 1920. Jean dia tompon'andraikitra (teo anelanelan'ny fiarakodia hafa) ny karazana 41, fantatra amin'ny anarana hoe "Royale" ho an'ireo mpanjifany voafantina. Ny vidin'ny fiara fitaterana maherin'ny 13 litatra dia avo roa heny noho ny Rolls-Royce amin'izao fotoana izao ary tsy nahita mpividy maro mihitsy aza, na dia eo aza ny fandravahana kapila elefant-drakitra noforomporin'ny renin'i Ettore Rembrandt. Maty nandritra ny fitsapana 1939 i Jean, ary naverin'i Ettore indray ny helm. Taorian'ny nahafatesan'i Ettore tamin'ny taona 1947, dia nitarika ny orinasa ny zandriny lahy Roland.
Fikambanana Bugatti, Take Two
Taorian'ny Ady Lehibe II, dia maro ny orinasa fiara Eoropeana no niady mafy mba tsy ho velona. Tsy nanambara ny bankirompitra, fa nanakatona ny varavarany i Bugatti. Saingy 30 taona taty aoriana dia nitsofoka ny tany ny tazo mahery iray. Romano Italiana Romano Artioli no namelona ilay marika - fa tsy ny orinasa Molsheim - tamin'ny fampidirana ny EB110 tamin'ny vanim-potoana nahaterahan'i Ettore Bugatti tamin'ny faha-110 taonany tamin'ny 1991. Na dia teo aza ny soniavin'ny lolo-kodiarana an-tsoavaly, dia teo amin'ny 150 EB110 ihany no novokarina, ary ny faharoa Ny fivoahana dia notapahana tamin'ny taona 1995.
Tamin'ny 1998, nividy ny anaran'i Bugatti ny mpizahantany alemà Volkswagen, ary nanokatra indray ny orinasa tao Molsheim (tsy ilay toerana iray ihany, fa iray vaovao, maoderina). Tamin'ny taona 2005, ny orinasa dia nanolotra ny fampanantenany hiaina ny fenitra an'i Ettore Bugatti amin'ny haingam-pandeha sy haitraitra amin'ny Bugatti Veyron 16.4, ary ny miliara-dolara mihoatra ny 1000 hp - ary io giro io.
Ny fiara amin'ny garan'ny gidro
Car Logos Exotic sy Hood Ornaments
Antony Ilaina ny Miaina ao Amin'ny Campus Ny Taona Voalohany Momba ny College
Ahoana ny fomba hisorohana ny fanafihana an-tsokosoko?
Inona no tadiavinao any amin'ny sekoly?
7 Ireo Biby Manimba Ny Fitsipika momba ny Siansa
Ny fanoratana diary momba ny Paska
Revolisiona Amerikana: Jeneraly Charles Lee
Ny adihevitra ambony momba ny zon'ny biby
Ny fomba hahazoana alalana havanana amin'ny dihy
Ny Ady Lehibe Faharoa: Konferansa Potsdam
Malagasy Idioms sy Expressions
Verb for 'Turn Turn'
Rahoviana ny Alakamisy Masina Alahady?
Ny fitroarana Soweto 1976 tamin'ny sary
Ny Rock Rock Genre Profile
Art Glossary: ​​Miongotra
Ny vanim-potoan'ny Advent amin'ny fiangonana katolika
Vavaka maraina ho an'ny ankizy
Mozika tsy ara-pivavahana nandritra ny Moyen Âge
Fandaharam-potoana iraisam-pirenena (SI)
Ny Lalàn'i Frederick Law Olmsted - Ny Campus-Tanana
Famakiana Quiz momba ny "Famonjena" nataon'i Langston Hughes
Ny fomba hiomanana amin'ny Fantasy Baseball Draft ao anatin'ny 60 minitra